Tantara · Desambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Tantara · Desambra, 2017
Tantara mikasika ny Tantara tamin'ny Desambra, 2017
Feon'ny Vehivavy Afrikana – tamin'ity herinandro ity
Satria rehefa manaja ny vehivavy ihany ny firenena ary mandray azy ireo am-pahamendrehana, dia izay vao afaka hisy ny tena fandrosoana. Voalohan-daharana amin'ny maha-olombelona ny vehivavy noho ny maha-reny sy mpikarakara voalohany azy
Mezcal : Fahaterahana Vaovao Indray Ho an'ilay Zava-Pisotro Nentim-paharazana Meksikàna
Amerika Latina17 Desambra 2017
Hatrizay, noraisina ho zava-pisotro tsy be mpisafidy, efa lasa hita eny amin'ireo trano fisotroana raitra indrindra eto ambonin'ny tany ny mezcal ankehitriny, miaraka amin'ny fanatsarana mendrika azy.
Amerika Latina11 Desambra 2017
Any amin'ny haabontany mirefy 2 000 metatra mahery any amin'ny tendrombohitr'i Andes no misy an'i Sewell . Tanàndehibe fitrandrahana varahina, nanambara izany ho Vakoka Manerantany ny UNESCO tamin'ity taona ity. Nanazava tantara fohifohy sy ny zava-misy ara-tsosialy ihany koa ny La Libélula
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Desambra 2017
Azia Afovoany sy Kaokazy10 Desambra 2017
"Iray amin'ireo maherifo ngezalahin'ny firenena Armeniana i Garegin Nzhdeh ary tsy any Yerevan ihany no tokony hananganana ny sarivongany fa manerana ireo faritra maro any Armenia ihany koa."